Ka bogo jadwalka maamulka cusub ee AC Milan ee caawa & berri (Goorma ayaa la qabanayaa shirka jaraa’id?) – Gool FM
Ka bogo jadwalka maamulka cusub ee AC Milan ee caawa & berri (Goorma ayaa la qabanayaa shirka jaraa’id?)
(Milano) 13 Abriil 2017 – Milkiilayaasha cusub ee AC Milan ee Yonghong Li iyo Han Li ayaa waqti xaadirkan Acore kula casheeynaya Silvio Berlusconi, iyagoo berri la kulmi doona kooxda iyo macallin Vincenzo Montella oo ay ugu tegi doonaan Milanello.
Fiidkan, Yonghong Li, Han Li, oo ay la socdaan maareeyayaasha Marco Fassone iyo Massimiliano Mirabelli ayaa la casheeynaya Berlusconi oo ay isna wehlinayaan Adriano Galliani iyo gabadhiisa Barbara Berlusconi, iyo madaxda Fininvest ee Danilo Pellegrino iyo Alessandro Franzosi.
Iibkii sanadaha jiitamayay ayaa maanta lasoo afjaray iyadoo lagu wado in berri 11-ka barqannimo ay qabtaan shir jaraa’id oo la wada sugayo si ay uga hadlaan qorshohoosa mustaqbalka dhow iyo midka dheer.
Marka uu dhamaado shirka jaraa’id 11-ka subaxnimo, waxaa la qaban doonaa shirka saamileeydii hore 14:30, sida uu sheegayo hilinka Sky Sports marka ay saacaddu tahay 18:30, Li Yonghong, Li Han, Fassone iyo Massimiliano Mirabelli ayaa tegi doona Milanello oo ay kooxda Milan kula casheeyn doonaan habeen dambe si ay niyadda ugu dhisaan kooxda oo duhurnimada Sabtiga kulanka adag ee Derby della Madonnina kula ballansan Inter Milan.
Halkani waa goobta berri barqadii shirka jaraa’id lagu qaban doono.
GOOGOOSKA: Anderlecht vs Manchester United 1-1 (Man U oo laga daba geeyay)
Michael Carrick oo niyad jab ku tilmaamay barbarihii ay la galeen Anderlecht